काठमाण्डाैं आउँदै गरेका प्रकाशको घटनास्थलमै सकियो जिन्दगी! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > काठमाण्डाैं आउँदै गरेका प्रकाशको घटनास्थलमै सकियो जिन्दगी!
एजेन्सी । आफन्तका अनुसार टिपरले गलत लेन दायाँतर्फ ओभरटेक गरेर कारलाई ठक्कर दिएको थियो । तर घटनापछि मुचुल्का गर्न पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले कारकै गल्ती देखाएर मुचुल्का बनाएपछि आफन्तले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । धादिङको गजुरीमा बिहीबार काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको बा४च २७९ नम्बरको मारुती अटो कारलाई काठमाडौंबाट गजुरीतर्फ जाँदै गरेको बा३ख ७३९३ नम्बरको टिपरले ठक्कर दियो ।
ठक्कर पछि ३३ वर्षीय चालक प्रकाश अधिकारीको घटनास्थलमै ज्यान गयो ।टिपरको ठक्करले चालक बस्ने सिट र ढोकातर्फको पुरै भाग छियाछिया भएको छ । मृतकका दाइ किशोर अधिकारीका अनुसार टिपरचालक, टिपरधनी र यातायात व्यवसायी धादिङकै भएकाले प्रहरीसँगै मिलेमतो गरी मुचुल्का बनाएका छन् ।
राति एउटै कोठामा सँगै सुतेकि श्रीमति बिहान बोलाउँदा जब उठिनन्
कुनै युवा डिपेन्डेन्ट भिषामा यूरोप जान चहानुहुन्छ भने यी युवतीलाई सम्पर्क गर्नुहाेस् (नम्बर सहित)
आमाले नै बुबाको पेट बोकिस भनेपछि छोरीले दिइन यस्तो जवाफ! (भिडियो सहित)
पोर्चुगलबाट परिवार भेट्न फर्केका शेर्पा घर नपुग्दै जीप दुर्घटनामा अस्ताए…
सुन्दर देखिनका लागि कुकुरको पिसा`ब पिउने गर्छिन् यी युवती!